Ukuthuthukiswa Komuntu Ngamunye
Ukuthuthukiswa kwalowo muntu kubonwe njengengqikithi yezigaba, ukukhulelwa kanye nomshado ukubeka izigaba ezibalulekile. Ukuguqulwa ukusuka komunye kuya kwesinye kwenziwa amandla ngamandla angaphandle (okhokho, imimoya emihle kanye nemimoya emibi, abathakathi bobulili bobulili), okungaba nomthelela omuhle noma omubi kubantu.
Izikole zokuqala ziyalwe ziqale ngokuthi yini okufanele zilindelwe nokuthi zizoziphatha kanjani esigabeni esilandelayo. Ngemikhosi nemidanso, bebengase baphule amaphutha okwedlule futhi bamukele ikusasa. Imikhosi nayo yacela ukwesekwa kokhokho futhi yaqinisa abaqalayo ngomlingo.
Ebekwe eceleni, noma eduze, amadolobhana ama-mahosi kanye ne-magota lapho bekhona abahlanganyeli abanele, bekungenzeki njalo ngonyaka. Intombazane yeVenda iya ezikoleni ezintathu zokuqala: vhusha ebusheni; tshikanda, ukuqinisa le vhusha; futhi dombani, isikole ngaphambi komshado. Esikhathini esedlule, abafana abaye bahlala e-thondo nabo bahlanganyela ezingxenyeni ezithile ze-dombani, kodwa namuhla bambalwa kakhulu, futhi izikole zabafana, i-vhutuka ne-thondo, zingasebenzi.
Abaningi baya embukisweni, bathulwe kamuva. Kuqhutshwa ngaphandle komzana, ngokuvamile endaweni yentaba noma entabeni, ezinyangeni zasebusika ezomile, ukusiza ekuphulukiseni inxeba lokusoka.
Lezi zinsuku, inamba ekhulayo, ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni, isokwe odokotela baseNtshonalanga, kunabaningi bendabuko. Abanye balaba odokotela baye bahlakulela imikhosi yabo futhi babulala isilo ngemva kokuba abantu abaningi basokwe, ukunikeza umsebenzi uhlobo oluthile lokufaneleka.
I-vhusha (ukuqaliswa ebusheni) isetshenziselwa ukuhlala izinyanga ezimbalwa, kodwa namuhla ngokuvamile iyenzeka ngezinsuku eziyisishiyagalombili kuphela. Amantombazane afundiswa ukuthi ukuthobeka yilokho okushiwo yi-Venda wesifazane. Ngenkathi behlangene endaweni yokulala, babhekana nokucindezela okukhulu, beka amakhanda abo bekhothama, amahlombe abo ewa ngobuso futhi izingalo ziboshiwe, noma izandla zabo ziphethwe ngaphansi kwamaconsi abo.
Benza imisebenzi elula, bephethe imithwalo esindayo emhlane noma emakhanda abo, bethinta izibeletho zabo, noma babambe izandla zabo. Banikezwa imfundo ejulile ngezocansi, ukuziphatha ngokocansi, ukuhlukumezeka nomshado, nokugwema ukukhulelwa ngaphandle komshado. Ukuhlukanisa kwakwenziwe ngokujwayelekile phakathi kwamadodakazi amaduna (i-vhusha ha vhakololo) kanye nabantu abavamile (i-vhusha ha vhasiwana).
Ukuhlabelela, ukudansa nokufunda imilayezo kwakuyizici ezibalulekile zesikole sabantu abavamile. Isikole sabahloniphekile sasiyimfihlo kakhulu, futhi kancane saziwa ngakho. Cishe yonke imisebenzi yayo yenzeke ngaphakathi kwesigcawu esinqunyiwe esigodini sikhulu, futhi kwakungekho umculo wokumemezela esidlangalaleni ukuthi lesi sikole siphethwe. Akekho owaziyo ukuya ezifundeni ezihloniphekile, kodwa izikhulu ezazitholile kakade zingavakashela abadayisi uma befuna.
I-tshikanda (ukuqinisa i-vhusha) yenzeke ngaphambi kwe-dombani, njalo eminyakeni emithathu noma emine. I-dombani, ephawula ekupheleni kwenqubo yokuqalwa, yayiyimfanelo yokugcina yomshado. Ukushaya kwecilongo le-kudu (phala phala) kwaphawula ukuqala. Umlilo ongcwele, ovuliwe emzaneni wenkosi, wahlala unyaka wonke.
Abaqalayo baphathwa ngemithi, futhi konke okusetshenzisiwe kwakufafazwe nemithi yokuvimbela ukuphazamiseka kokubi. Bonke abaqalayo bahlonywa, futhi ngoba bonke abakwa-dombani babengavunyelwe ukugcoba noma ukugeza. Ngokwesiko i-dombani yayinezigaba ezingu-10, ehlala iminyaka emibili, kodwa namuhla ayikho isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisishiyagalolunye.
Abaqalayo bafundiswa ukudansa kanye nezingoma eziyimfihlo, ezivezwe ezintweni eziyimfihlo, ukubukela futhi bahlanganyele ekufundiseni ukulinganisa, futhi bathole imfundo yezocansi. Inhloso ukujwayela le ntsha nazo zonke izici zomshado, kanye ne-Venda mores. Njengoba kubhekwa njengomcimbi kazwelonke, i-Venda, i-dombani ingabanjwa kuphela ngaphansi kwe-khosi ye-Singo. Isici esihlabayo se-dombani ngumdanso we-domba owenziwa ngamantombazane azungeze umlilo ongcwele.
Abaqalayo bakha umugqa, ngamunye ephethe isigqoko sentombazane phambi kwakhe, okwenza uchungechunge olude olufaka isigqi sesigubhu sezingoma nezigubhu ze-mirumba. Ngokomkhuba amantombazane adansa behamba, kodwa namuhla agqoka i-shedu edlula phakathi kwemilenze, ekwakheni i-apron ngaphambili kanye nephaneli elingemuva elilenga phansi.
Baye bagqoke namasongo ensimbi namagceke asebenzayo njengoba adansa. Umdanso ufanekisela i-python, ehlobene nokuzala nokuhamba komntwana esibelethweni. Iphinde imele i-python ekholelwa ukuthi ihlala eFundundu, echibi elingcwele leVenda esigodini saseSoutpansberg.
Udonga lwamaKhoro lungumzimba we-python unkulunkulu, kanye neGceke Lake Fundudzi, indawo yokuvela, isibeletho se-cosmological; Ngakho-ke abaqalayo basesibelethweni se-python, sebekulungele ukuzalwa kabusha njengamalungu omshado futhi ahloniphayo emphakathini.
Umqondo Uhlukile Ngokuthwasa
Amasonto angamaKristu athatha isimo sengqondo esiphathelene nokuqaliswa, amanye avimbela amalungu ukuba abe khona ezikoleni zokuqala. Amanye amasonto 'azimele' akhuthaza amalungu ukuba ahambe, kanti amanye ahlinzekela ezinye izindlela, ngokuvamile ahlanganisa izinkolelo nezendabuko zobuKrestu.
Ezinye izinguquko zenziwe yimfundo yanamuhla, izibhedlela kanye nokusebenza kwabantu abafudukayo, kodwa amantombazane amaningi asekhona. Esikhathini esedlule, akekho umuntu weVenda ongashada nowesifazane owayengazange aphumelele e-dombani.
Uma eshada owesifazane ovela kwelinye iqembu, njengeTsonga noma iSuthu, kuzodingeka ahambe nedombani. Namuhla, isizathu sokuthi iningi labantu abaqalayo lizinikezele ukuba 'bafunde imithetho' noma 'bazuze ukuhlakanipha' (u guda milayo). Ukwazi i-milayo inika owesifazane onolwazi olukhethekile olwamvumela ukuthi ahlanganyele emihlanganweni yabesifazane kanye nemikhosi.